Kulan loogaga hadlayay arrimaha Xaqjirnimada oo lagu qabtay Muqdisho - Jowhar Somali news Leader
Home News Kulan loogaga hadlayay arrimaha Xaqjirnimada oo lagu qabtay Muqdisho
Kulan loogaga hadlayay ka hortaga fikirka xagjirka iyo sidii loogaga wacyigelin lahaa bulshada ayna soo qabanqaabisay Wasaarada Awqaafta iyo Arrimaha diinta ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Kulankan ayaa waxaa ka soo qeybgalay mas’uuliyiin ay ka mid ahaayeen Wasiir ku xigeenka Wasaarada Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Dowlada Federalka Cismaan Aadan Dhuubow,wasiirka Wasaarada Awqaafta iyo Arrimaha diinta Hirshabelle Sh.Abuukar Xasan Cali,Wasiiru Dowlaha Awqaafta iyo Arrimahada Diinta Nuur Xaashi Warsame,wakiilo ka socday Majmaca Culumaa’udiinka,qaar kamid ah Imaamyada Masjidyada magaalada Muqdisho iyo culumaa’udiin kale.
Wasaarada Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ayaa kulankan intii uu socday waxaa ay ku soo bandhigtey buug ka hadlaya kahortagida arrimaha xagjirnimada.
Kulankan ayaa waxaa culumaa’udiinka ka hadlay ay soo bandhigeen Diinta Islaamka waxa ay ka qabto fikirka xagjireynta iyagoo ku dheeraaday soona bandhigey cadeymo la xiriira fikirka xagjirnimada.
Ugu dambeyntii Wasiir ku xigeenka Wasaarada Awqaafta iyo arrimaha diinta Cismaan Aadan Dhuubow oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay doorka muhiimka ah ee loogaga baahan yahay culumaa’udiinka Soomaaliyeed inay ka qeybqaataan sidii loogaga hortagi lahaa fikirada xagjireynta dhalinyarada Soomaaliyeed.
kulanka loogaga hadlayay xagjirnimada